Aba ngabaphathi begama eligqibeleleyo lesi-5 ukukhusela | Iindaba zeGajethi
Inani labasebenzisi abasebenzisa isixhobo esiphathwayo ukunxibelelana ne-Intanethi ekugqibeleni liye labagqitha abo basebenzisa ikhompyuter. Kodwa njengoko ukuhamba kwabasebenzisi kuye kwanda, kunjalo ke umngcipheko kunye nezoyikiso ezinokubakho esinokujongana nayo mihla le sisebenzisa iinkonzo ze-Intanethi esizithandayo.
Qho ngonyaka, iinkampani zokhuselo eziphambili zenza uluhlu apho zisibonisa khona, njengakunyaka weshumi elinanye ngokulandelelana, ezona passwords zisetyenzisiweyo ziyafana, kwaye apho sihlala sifumana phakathi kwezikhundla zokuqala iipassword 1234567890, ipassword, 11111111 kunye ezifanayo , Kulula kakhulu ukukhumbula iiphasiwedi kodwa ezibeka ukhuseleko lwethu kwidijithali emngciphekweni. Ukuthintela oku, eyona nto sinokuyenza kukusebenzisa umphathi wegama eligqithisiweyo.
Sebenzisa iphasiwedi efanayo kuzo zonke iinkonzo zewebhu esizisebenzisayo ayisosisombululo esisiso, kodwa kuyimpazamo eyenziwa ngabasebenzisi abaninzi. Ukuba sifuna ukukhuselwa nge-100%, eyona nto sinokuyenza yile yenza isitshixo esahlukileyo kwinkonzo nganye yewebhu apho sifikelela khona, igama eligqithisiweyo ekufuneka lenziwe ngoonobumba abasi-8, kubandakanya amanani, oonobumba (oonobumba abakhulu nabancinci) nabanye oonobumba abakhethekileyo.
Yonke le nto inzima kakhulu kwaye ayizukuthabatha ixesha elide kuphela, kodwa kuya kufuneka senze imemori yokuziqhelanisa ukuze sikwazi ukukhumbula ezona zitshixo ziphantse zingafikeleleki nakuthi. Ngethamsanqa, kukho ezinye iinkqubo esivumela ukuba sivelise amagama agqithisiweyo, amagama agqithisiweyo ahlukileyo kwinkonzo nganye esingena kuyo kwi-Intanethi, nokuba ngokusebenzisa ikhompyuter yethu okanye izixhobo zethu eziphathwayo.
Ndithetha ngabaphathi begama eligqithisiweyo, usetyenziso olungavelisi kuphela iipaswedi ezahlukeneyo ukukhusela idatha yethu kwi-Intanethi, kodwa nayo Banoxanduva lokuzigcina, ukuze sithi xa sikrwaqula, sikwazi ukufikelela kwinkonzo ye-Intanethi esiyifunayo ngaphandle kokufaka zombini igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha, ukusinika ithuba lokuba kude kube ngoku besingonwabanga.
Siyabulela kwezi zicelo, ekugqibeleni siya kuyeka ukusebenzisa iphasiwedi efanayo kuyo nganye yeenkonzo ze-Intanethi esizisebenzisa rhoqo. Ezi ntlobo zezicelo zisebenzisa Ukubethela ukhuseleko kwe-AES-256Ke ukuba abahlobo bangaphandle banokufikelela kwidatha yethu, kuya kufuneka bachithe iminyaka embalwa bezama ukufikelela kwidatha.
Ngaphambi kokukhetha oyena mphathi wegama eligqithisiweyo, Zininzi izinto ekufuneka zithathelwe ingqalelo, kuba ayizizo zonke izicelo ezikhoyo kuwo onke amaqonga, kwaye ezo zifumanekayo aziboneleli siphumo sinye okanye ukhetho kuzo zonke, ngenxa yezithintelo ezithile zangaphakathi kwezinye iinkqubo zokusebenza. Apha sikubonisa ukuba zeziphi nabaphathi begama eligqithisiweyo le-iOS, i-Android, iLinux, iMacOS kunye neeWindows.
1.1 1Password ukuhambelana
2.1 Ukuhambelana kweLastPass
3.1 Ukuhambelana kwe-OneSafe 4
4.1 Dashlane ukuhambelana
5.1 Ukuhambelana kweMemBear
I-1Password yayingomnye wabaphathi begama eligqithisiweyo kwimarike kwaye kule minyaka idlulileyo ukwandisa inani lemisebenzi isinika yona. Ayisivumeli nje ukuba sigcine ipassword, kodwa ikwasivumela ukuba sigcine iilayisensi zesoftware, iinombolo zeakhawunti yebhanki kunye namakhadi etyala, amakhadi okunyaniseka ...
1Igama eligqithisiweyo liyasivumela Yahlela lonke olo lwazi ngokweendidi ezahlukeneyo, ukuze xa sikhangela igama eligqithisiweyo lemeyile yethu ye-Gmail, kufuneka siye kuphela kolo luhlu. Ngale ndlela, lonke ulwazi luyalelwe ngokupheleleyo kwaye lwahlelwa. Xa kuziwa ekuvumelaniseni idatha yethu kunye nezinye izixhobo, i-1Password isinika ithuba lokwenza njalo nge-iCloud (kwimeko yeemveliso ze-Apple) okanye ngeDropbox.
I-1Password isinika iintlobo ezimbini zemirhumo. Umntu $ 2,99 ngenyanga, esivumela ukuba sisebenzise zonke izicelo ezisinika zona kwizinto eziphilayo ezahlukeneyo kunye nosapho olunye, oluthi $ 4,99 ngenyanga, luvumele amalungu amahlanu osapho olunye ukuba babelane ngendlela ezizimeleyo, iiphasiwedi esizisebenzisayo ngosuku.
I-1Password yaqala yakhutshwa kwimveliso ye-Apple ecosystem, kodwa kule minyaka iyanda kwaye namhlanje iyafumaneka kuzo zonke iidesktop kunye namaqonga eselfowuni ngaphandle kweLinux, Ukuba sesinye sezixhobo ezilungileyo zolu hlobo ukuhlala unamaphasiwedi akhuselekileyo.
Khuphela i-1Password yeMac kunye yeWindows
Omnye wabaphathi begama eligqithisiweyo yi-LastPass, inkonzo efana kakhulu naleyo sinokuyifumana nge-0Password kwaye esivumela ukuba ikhompyutha lonke ulwazi esilugcina kwesi sicelo kwiindidi ezahlukeneyo ke akufuneki ukhangele kwisicelo. Esi sicelo, njengolu hlobo, sisinika ukongezwa kwezixhobo eziphathwayo apho sinokuvula khona usetyenziso ukuze luzenzele ngokuzenzekelayo ekugcwaliseni iindawo eziyimfuneko kwiwebhu apho sixhuma khona.
Njengegama elingu-1, I-LastPass ikwabonelela ngenkqubo yenyanga yokubhaliselwa kunye nonyaka ukuze sikwazi ukugcina sikhuselekile iiphasiwedi kunye neenkonzo esizisebenzisa rhoqo kwaye ngamanye amaxesha, ezinje ngamanani eelayisensi zesoftware, amakhadi okunyaniseka ... Ixabiso lokubhalisela umsebenzisi li-2 kuphela zeedola ngenyanga. Kodwa ukuba sifuna ukuba lonke usapho lusebenzise izibonelelo ezisinika zona, sinokukhetha ukubhalisela usapho okungama- $ 4 kuphela ngenyanga, kusinika iilayisensi ezi-6.
I-LastPass sesona sicelo silungileyo sokulawula ii-imeyile zethu ukuba sisebenzisa rhoqo iinkqubo ezahlukeneyo zokusebenza, kuba ziyafumaneka zombini IiWindows, ezinje ngeMac, iLinux kunye ne-Android, iOS kunye neFowuni yeWindows. Kodwa ukongeza, ikwabonelela nangezandiso zeFirefox, iChannel, iOpera kunye neMaxthon.
Umphathi wegama lokugqibela lePassPassMahala
Umphathi wegama lokugqibela lePassPass
Umthuthukisi: Imbuyekezo LogMeIn, Inc.
Khuphela i-LastPass yeWindows, Mac, Linux
Umphuhlisi we-OneSafe yenye yezimbalwa ukuza kuthi ga kulo mhla awukhethanga inkqubo yobhaliso, Inkqubo engabhenisi kubo bonke abasebenzisi, ke ukuba ukwelo qela labasebenzisi, i-OneSafe isenokuba sisicelo osifunayo. Enkosi kwa-OneSafe esinokuba kwindawo enye amanani ekhadi lethu letyala, iikhowudi zePIN zamakhadi kunye nokufikelela kumaziko, inani leeakhawunti zebhanki, idatha yerhafu kunye namagama abasebenzisi kunye neepassword kwiiwebhusayithi esizindwendwelayo ngesiqhelo.
Nangona kuyinyani ukuba ayisiboneleli ngeendlela ezininzi zokwenza ngokwezifiso ngokungathi sinokufumana kwezinye iinkqubo ezinje nge-1Password okanye i-LastPass, I-OneSafe isinika iinketho ezisisiseko ezinokufunwa ngumsebenzisi mihla le ukuhlala unamagama agqithisiweyo ewebhusayithi yakho, kunye nolunye ulwazi ekufuneka ukhuselekile ngalo lonke ixesha. Njengoko ingesiso isicelo esisebenza phantsi kobhaliso kangangeminyaka emibini okanye emithathu, umphuhlisi uqalisa inguqulelo entsha ekufuneka siyihlawule kwakhona, kodwa kunjalo, kubiza kakhulu kunokuhlawula umrhumo.
Ukuhambelana kwe-OneSafe 4
I-OneSafe yenza ukuba ifumaneke kuthi kuphela Inkxaso yeApple kunye neGoogle ecosystems, Ke ukuba sifuna ukusebenzisa esi sicelo kwiWindows PC okanye kwiLinux PC okanye kwiMac yethu, i-OneSafe ayisosicelo esifunayo.
indawoSafe | umphathi wegama eligqithisiweyo
Umthuthukisi: Isitudiyo seLunabee
ImaneSafe + nomphathi wegama eligqithisiweyo€ 4,99
Ukuba sisebenzisa isixhobo esinye ukunxibelelana ne-Intanethi, nokuba yi-smartphone, ithebhulethi okanye ikhompyuter, iDashlane yeyona ndlela ilungileyo ekhoyo ngoku kwintengiso, ukusukela Kusimahla ukuba sisebenzisa isixhobo. Ukuba elo nani liyanda, into enokwenzeka, kufuneka siqhubele kwimirhumo, imirhumo enexabiso le-39,99 yeerandi ngonyaka, elona xabiso liphezulu lazo zonke izinto esinokuzifumana kolu hlobo lwezicelo.
Enkosi kuDashlane sinokugcina idatha yethu yokufikelela, inombolo yeakhawunti, iinombolo zamakhadi etyala kwindawo enye, senze amanqaku akhuselekileyo, kongeza imifanekiso yabucala ... ukuze onke ulwazi olufuna ukukhuselwa mayibe ngamaxesha onke
UDashlane, kunye neLastPass, lelinye lamaqonga asinika isicelo IWindows, iMac kunye neLinux, ngokunjalo, ngokucacileyo, kwizixhobo eziphathwayo.
UDashlane-Umphathi wegama eligqithisiweyo
Khuphela iDashlane yeWindows, Mac kunye neLinux
Omnye wabantu abafikayo kwimakethi yolawulo lwegama eligqithisiweyo yiRememBear, inkonzo yeqonga lomnqamlezo okwangoku ifumaneka simahla ukukhuphela kuwo onke amaqonga, Kuba ikwi-beta, kwaye okwangoku ayisinikeli nayiphi na inkqubo yobhaliso ukuze sikwazi ukonwabela zonke izibonelelo esizifunyenwe lundwendwe olutsha kwiqela labaphathi begama eligqithisiweyo.
I-RememBear yinkonzo esisinika ukhetho oluncinci xa kuziwa ekugcineni idatha zethu ukusukela, ukongeza ekusivumeleni ukugcina idatha yethu yokungena, Ikwasivumela ukuba sigcine iinkcukacha zekhadi letyala lethu, ukuze sikwazi ukongeza amanani ngokukhawuleza xa sifuna ukuthenga into nge-Intanethi.
I-RememBear iyafumaneka IMac, iOS, Windows kunye ne-Android. Kodwa ukongeza, ikwasinika izandiso zeChannel, Firefox kunye neSafari, ukuze sikwazi ukulawula ngendlela elula ukufikelela kwiiwebhusayithi ebesikade sigcina kuzo idatha yokufikelela.
I-RememBear: Umphathi wegama eligqithisiweyoMahala
I-RememBear: Umphathi wegama eligqithisiweyo kunye neWalethi ekhuselekileyo
Khuphela iRemembear yeWindows ne-Mac
Nangona kuyinyani ukuba kwi-Intanethi sinokufumana inani elikhulu labaphathi begama eligqithisiweyo, ndithathe isigqibo sokugxila eyaziwa kakhulu, ukunqanda ukuwela kwimpazamo ye- ngokuya kubaninzi ngokuya kubamnandi. Bonke aba baphathi begama eligqithisiweyo basebenze iminyaka eliqela kwaye ukhuseleko kunye nesisombululo abasinika sona baphume kubo bonke ukuthandabuza okufanelekileyo.
Ukucaca ngakumbi, zeziphi iindlela ezinomdla kakhulu ngokubhekisele kubaphathi begama elikhoyo kwaye esixoxe ngalo kweli nqaku, apha ngezantsi ndibandakanya enye itafile ngokuhambelana neenkqubo ezahlukeneyo zokusebenza, nokuba ziiselfowuni okanye i-desktop.
1Password Si Si Hayi Si Si Hayi Si
OneSafe Si Si Hayi Hayi Hayi Hayi Hayi
Dashlane Si Si Hayi Si Si Si Si
Ukukhumbula Si Si Hayi Si Si Hayi Si
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Abaphathi bephasiwedi abagqwesileyo